Sidee uga soo dejisan kartaa taxanaha bilaashka ah Telegram | Madasha Mobile -ka
Cristian Garcia | 14/10/2021 09:00 | telegraam
Si la yaab leh, waxaa laga yaabaa inaad ogaatay ama laguu sheegay in Telegram -ka aad ka qaban karto wax ka badan hadalka ama samaynta hibo. Waana sidaas, maxaa yeelay isticmaaleyaal badan ayaa soo gala kanaallo kala duwan oo ay ku dhajiyaan waxyaabaha nooc kasta leh oo laga yaabo inay ku anfacaan. Taasi waa meesha aan ka helno su'aasha ah sideen uga soo dejisan karaa taxanaha bilaashka ah Telegram, sababta ereyada loo wada dhigo Taxanaha Telegram oo soo dejisto priori waxay u muuqataa wax waalan, laakiin haa, waxaa jira wax la mid ah waxaanan kuu sheegi doonnaa sida loo sameeyo.
Markaa iyada oo aan loo baahnayn waxaa jira dhowr siyaabood oo looga soo dejisan karo waxyaabo badan oo warbaahineed sida filimo ama taxane Telegram waana wax lagu mahadiyo bots -ka otomaatiga ah ee appku ku leeyahay kanaallo kala duwan. Dabcan, sharci aad u badan maahan inay sidaas tahay adiga ayay kugu xiran tahay inaad isticmaasho habkan iyo in kale. Dhammaan bootsiyadan waxaa loo isticmaalaa in lagu raadiyo waxyaabo gaar ah oo aan rabno kanaallada dadweynaha waxayna noqon karaan kuwo aad waxtar u leh. Xaqiiqdii, fiiri haddii ay waxtar leedahay oo ay fududahay inaadan u baahnayn barnaamij dibadeed ama wax kale oo aan ahayn Telegram. Laakiin ha ka welwelin xog aad u badan oo lama filaan ah, aan ku bilowno waxay yihiin bots -yadu.
1 Sidee bay bots -yadu u shaqeeyaan soo dejinta taxanaha Telegram -ka?
2 Sidaad ugu biiri lahayd kanaal si aad uga soo dejiso taxanaha Telegram -ka?
2.1 Sideen ku heli karaa filimada ama taxanaha aan ka soo dejiyo Telegram taleefankayga gacanta?
Sidee bay bots -yadu u shaqeeyaan soo dejinta taxanaha Telegram -ka?
Si aan kuu siiyo fikradda, waxba kama duwana botsyada kale ee laga yaabo inay ku jiraan Telegram ama barnaamijyada kale sida Discord. Waa bots ka shaqeeya isla barnaamijka Telegram -ka iyo in ujeedkoodu uusan ahayn wax kale oo aan kuu sheego xog gaar ah hore u qaabeeyey hal qof, tusaale ahaan, kuu sheeg waqtiga maalin kasta waqti go'an ama waxa na xiiseeya, sidoo kale inaad wax kala soo baxdo. Laakiin waxay tahay inaysan ahayn taxane oo kaliya, waxay kaloo noqon kartaa muusig sidaan nidhi ama filimaanno. Sharci ahaanshuhu waa muuqdaa maqnaanshihiisa, maanka ku hay inay tahay mas'uuliyaddaada.
Habka bot u raaco oo ay tahay inaad ogaato waa kuwan soo socda:
Si aad u bilowdo waa inaad si cad u sheegtaa botka aad rabto ama u isticmaal xiriir aad ka hesho internetka botkaas. Hadda waa inaad gujisaa bilowga markaad wada hadalka la furaysid bot. Taas ka dib, waa inaad isticmaashaa amarradeeda oo tilmaami doona ama mararka qaarkood furi doona sahanno waxaadna ka jawaabi doontaa damacaaga si aad u raacdo tilmaamaha. Ugu dambayntii, waxaad ka saari kartaa wada sheekaysiga liiska markii aadan rabin inaad mar dambe isticmaasho.
Maskaxda ku hay in xitaa haddii aad la hadasho, uusan kuu jawaabi doonin, uusan ahayn qof ka dambeeya isaga oo hadlaya, waa bot loo qorsheeyay inuu ku siiyo waxyaabo gaar ah. Gabi ahaanba waa bilaash mana lihid xadka bot si aad u rakibto ama aad ugu habeysato Telegram. Kaliya markaad daasho ayaad tirtirtaa oo mar dambe ma habayn doontid botka. Hadda waxaan kuu sheegi doonnaa sida loogu biiro kanaalladaas oo leh bots soo dejisan.
Sidaad ugu biiri lahayd kanaal si aad uga soo dejiso taxanaha Telegram -ka?
Tani waa mid aad u fudud oo waxaan sidoo kale ku siin doonnaa magacyo kanaal oo kala duwan oo aad adigu naftaada ka raadin karto Telegram oo aad ku biiri karto welwel la'aan. Markaad rakibto barnaamijka, haddii aadan hore u haysan, waa inaad aadaa mashiinka raadinta oo aad gasho magacyada kanaalada aan halkaan hoos ku soo qori doono si aad ugu soo biirto kanaalka. Mar dambe.
Filimada x Google Drive Latino
Filimka Dale play
Dale wuxuu ciyaaraa filimaan
Zuby Taxanaha Popcorn
Waxaan kugula talineynaa mar haddii aad ku soo biirto kanaalka, maxaa yeelay haddii aadan maalin walba ku yeelan doonin ogeysiisyo joogto ah Telegram waana wax, waayo -aragnimadeenna, ka xanaajinaya. Kuma caajisi doontid gelitaanka kanaaladan maxaa yeelay maalin walba ayay wararka soo geliyaan. Haddii aad maskaxda ku hayso taxane ama filim aad rabto inaad aragto, waxaad had iyo jeer isku dayi kartaa inaad aragto haddii durba lagu soo dhejiyay kanaalka mahadnaqa bot. Taas awgeed waa inaad ku baartid adiga oo adeegsanaya mashiinka raadinta laftiisa iyo gelitaanka magaca ama xitaa ka raadi faylka su'aasha ku jira mashiinka raadinta faylasha la soo geliyay.
Taasi waa sida ay u fududaan lahayd, runtii. Kaliya markaad ku biirto kanaalka oo aad bilowdo inaad soo dejiso waxyaabaha ku jira markaad baarto oo aad hesho, waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto taxane Telegram iyo xitaa filimada, sababtoo ah waxaan ku darnay kanaallo iyagana muujinaya. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah markaad soo dejiso, waxaan ku siin doonnaa xoogaa talo ah. Maaha wax aan waxba ahayn, waa inaan aragnay inay tahay wax soo noqnoqda soo dejinta taxanaha Telegram -ka.
Sideen ku heli karaa filimada ama taxanaha aan ka soo dejiyo Telegram taleefankayga gacanta?
Sababtoo ah waa sidaas, Telegram waligeed ma keydiso waxa lagu soo dejisto sida caadiga ah. Waa inaad gacanta ku samaysaa dhammaan kanaalada. Taasna waxaan kuugu sharxi doonnaa si dhaqso leh, ha ka welwelin in Madasha Móvil aan kugu caawin doonno illaa dhammaadka.
Si aad u bilowdo, ka raadi filimkaas ama taxanaha Telegram -ka aad doonaysay inaad aragto. Hadda oo aad heshay, bilaw soo dejintiisa (xusuusnow inay tahay inaad tagto biraawsarka faylka wada hadalka ama ku raadi magac qoran). Hadda waa inaad u tag menu -ga caadiga ah oo leh saddex dhibcood oo aad ku taal geeska midig ee sare ee filimka aad soo dejisanayso, menu caadiga ah ee aaladaha iyo xulashooyinka, waad taqaan. Hadda guji ikhtiyaarka ah inaad ku keydiso soo -dejimaha si taleefankaagu ugu keydiyo filimkaas galka soo -dejinta ee keydkiisa. Iyo talaabada ugu dambaysa, waxa kaliya ee hadhay waa in la furo maareeyaha faylka, hadda kaydinta gudaha ka dibna gal galka wax soo dejinta.
Sidaa darteed, tani waxay ahaan lahayd, waxaad mar hore lahaan lahayd oo soo degsan lahayd faylka filimka ama taxanaha Telegram si aad mar walba u dareento inaad daawato. Intaa waxaa dheer iyo sida xog dheeri ah, Waxaa laga yaabaa inaad la kulanto kanaalka qariibka ah oo kaliya ma daabaco xiriirinta soo dejinta, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay xiriiro aad ku daawato internetka. Taasi waa sababta aadan u baqin, waa ikhtiyaar kale. Kanaaladan badiyaa sidoo kale waxay leeyihiin ikhtiyaarka kale, taas oo ah, soo dejintu way sarraysaa laakiin mararka qaarkood waxaa jira daawashada internetka.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkani uu ahaa mid waxtar leh isla markaana wixii hadda ka dambeeya aad taqaanno sida taxanaha Telegram -ka iyo aflaamtu u socdaan si uusan kuugu qabsanin gudbinta. Waxaan kugu arki doonaa maqaalka Madasha Mobaylka xiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Shabakadaha Bulshada » telegraam » Sidee uga soo dejisan kartaa Telegram taxane bilaash ah